China Steel Support Fittings fekitari uye bhizimisi | Zhongming
Luowen inogadziriswa simbi Prop inoiswa kune yakatwasuka inotsigira system mukuvaka kutsigira matanda danda uye mafomu.
Telescopic simbi props anoshandiswa pakuchenesa kwema slab formwork uye kune akasiyana akasiyana saiti zvido. Are telescopic simbi props nekugara kukuru. Zvichienderana neprop modhi, iyo yekupedzisira inogona kuvezwa kana poda yakavharwa, yakapendwa. Kugadziriswa kwayo uye kugadzirisa dhizaini inopa nekukurumidza prop kugadzirisa.
Fomu yekushongedza ine zvigadzirwa zvinosanganisira kuisa akawanda mayuniti pa square mita sezviri kudikanwa kuti uwane yakachengeteka uye yakagadzikana shoring, inokwanisa kutsigira iyo slab ukobvu yakatsanangurwa pabasa.
Simbi Prop inoiswa kune yakatwasuka inotsigira system mukuvaka kutsigira mafomu, sekuvaka pasi.
Simbi Prop inowanzo kuverengerwa pasi peplate, yekunze chubhu, yemukati chubhu, swivel nati, cotter pini, yekumusoro ndiro uye nenhumbi dzekupeta katatu, musoro jack, chimiro chiri nyore uye chinoshanduka.
Simbi Prop iri nyore yechimiro, saka zviri nyore kuungana pamwe nekukatanura.
Simbi Prop inogadziriswa nekuda kweiyo yekunze chubhu uye yemukati chubhu, yemukati chubhu inogona kutambanudza uye kudzikira mukati rekunze chubhu, uye ipapo inogona kugadziriswa zvinoenderana neinodiwa kukwirira.
Steel Prop inogona kushandiswazve, uye kana yainge isingabatsiri, izvo zvinhu zvinogona zvakare kuwanikwa.
Simbi Prop inogona kuchinjika kune inodiwa kukwirira zvichienderana neakasiyana kukwirira kwezvakavakwa.
Tarira: Nezve iyo tube ukobvu, isu tinogadzira akati wandei emhando saizi, senge chubhu ukobvu 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, kana isu tinogona kuburitsa seyakagadzirwa.
telescopic simbi yekushandisa yave ichishandiswa mukushamisa muzvirongwa zvisingaverengeke zvekuvaka, uye vatengi vedu vachiri kuzvifarira nekuda kwekugona kwayo uye nyore kushandisa. kupa kuvimbika uye kuchengetedzeka panzvimbo yekuvaka.
Kana isu tikaramba tichifunga nezve mhando yezvinhu zvakasvibirira zvinoshandiswa, maitiro ekugadzira uye kurapwa kwekupedzisira kunoiswa kune zvigadzirwa zvedu, mhedzisiro panzvimbo ndeye
kuvimbiswa. Aya maProps akagadzirwa uye anogadzirwa zvichitevera nhungamiro dzeUNE 180201. Dhata rese rakaratidzwa mugwaro iri rinotsigirwa na
kuyedza kwakasimba kunoitwa murabhoritari yekuyedza. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kushanda chaiko, kushandiswa uye kubata kweiyo telescopic simbi prop, ndapota taura, tichava vanofara kuenda kune yako queries.
Ringlock Scaffolding chikomboredzo, Scaffolding Chinogadziriswa Screw Jack, Metal Cuplock Scaffolding, Heavy Duty Ringlock Scaffolding, Ringlock Scaffolding Zvikamu, Kwikstage Scaffolding Chishongedzo,